Kooxo hubeysan oo Beledweyne ku dilay Nabaddoon si weyn loo yaqaannay
June 12, 2012 - Written by Hiiraan:-Kooxo ku hubeysan bastoolado ayaa xalay ku dilay xafadda Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne nabadoon caan ka ah magaalada B/weyne waxaana magaciisa la yiraahdaa Cabdi Ibraahim Idiris (Goobe) waxaa kale oo uu ahaa ganacsade aad looga yaqaan gobalka Hiiraan.
Masuuliinta gobalka Hiiraan ee DFKM ayaa ku eedeeyey dilka xalay loo geystay alaha u naxariistee nabadoon Cabdi Ibraahim Idiris (Goobe) in ay ka danbeeyaan Ururka Al-Shabaab gaar ahaan kooxdooda amniyaadka.
Kooxda dishay Nabadoon Cabdi Ibraahim Idiris (Goobe) ayaa ka koobnaa 3qof sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah waxaana u suurto gashay in ay baxsadaan ;Goobta uu dilka ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka gobollka Hiiraan iyaga oo howlgalo ka sameeyey xaafada Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne .
Dadweynaha ku dhaqan magaalada B/weyne ayaa walaac ka muujiyey dilalka qorsheyn ee lagu leynayo waxgaradka iyo dadka rayidk ah ee aan waxba galabsan .
Ilaa haatan ma jiraan cid sheegatay masuuliyada dilka Nabaddoon Cabdi Ibraahim Idiris (Goobe) oo xalay lagu dilayxafadda Howl-wadaag ee magaalada Beledweyne